Iinkonzo kunye neengozi zeNtengiso yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
NgeCawa, ngoSeptemba 21, 2014 Douglas Karr
Isiseko se-infographic ngu okulungileyo nokubi, kodwa andazi ukuba ibethelele isikhonkwane entloko. Izinto ezilungileyo (ezilungileyo) zonke zichanekile kakhulu ezixhasa iinzame zentengiso yemithombo yeendaba, kodwa i-cons iyathetha kwizikhewu ekuqondeni, kwisicwangciso kunye nohlalutyo ngaphezulu kokuthengisa ngolwimi. Masizithathe nganye nganye.
I-50% ye-C-Suite ayiqinisekanga yexabiso lemidiya yoluntu. Oku kunokuba yimicimbi eliqela. Abasebenzi basenokungabi njalo ukulinganisa ngokuchanekileyo ifuthe kunye nokubonelela ngeengxelo ezifanelekileyo kwi-C-Suite yabo. Kananjalo abanakho ukungaliboni ifuthe lexesha elide lokunxibelelana ngokufanelekileyo nabaphulaphuli bakho ekuhlaleni kunye izibonelelo ekunzima kakhulu ukuzilinganisa.
Imithombo yeendaba zentlalo inika kuphela i-1.14% yazo zonke i-e-commerce traffic. Ndibiza ubuxoki ngale nto ngenxa yezizathu ezininzi. Okokuqala nokuphambili, uninzi lwabantu lusebenzisa usetyenziso ukunxibelelana nemidiya yoluntu. Eli ayilo nani lincinci… ukuya kuthi ga kwi-90% yakho Ukudluliselwa kumajelo asekuhlaleni akunakulinganiswa phakathi kohlalutyo kuba beza kwikhonkco ngqo kwi-app. Ungayichazanga impembelelo kunye nokufumanisa okunikezelwa yimithombo yeendaba zentlalo. Uguquko alunakwenzeka kunxibelelwano oluthe ngqo- kodwa wonke umntu uyazi ukuba Amazwi omlomo inefuthe elikhulu kwiimveliso nakwiinkonzo esizithengayo- kwaye intlalontle yi-WOM.
I-85% yeenkampani azixhumi imisebenzi yentlalo kwiziphumo zeshishini. Njengaku # 1, ayisiyonto imbi malunga nokuthengiswa kweendaba zosasazo, lo ngumcimbi wangaphakathi wenkampani. Ukukwazi ukunxibelelana ngokukuko, ukubandakanya, ukukhulisa, ukukhulisa, ukuqokelela ingxelo kunye nokubonelela ngokuthe ngqo kubathengi bakho kusebenza ngokufanelekileyo kwimidiya yoluntu. Ukuba iinkampani azisebenzisi loo nto, lityala labo… ayilotyala loluntu.
I-imeyile isaphumelela kwimithombo yeendaba ngokwentetho yokuguqulwa kwama-40 kuye kwayi-1. Ngaphandle kwamathandabuzo… kodwa ukuba unedilesi ye-imeyile yomntu, oko kuthetha ukuba sele unolwalamano nabo! Intlalontle ibonelela ngethuba lokwakha ubudlelwane obaneleyo ukuqokelela idilesi ye-imeyile! Sabelana ngezi zithuba kwiMartech kwezentlalo apho kwabelwana ngazo… emva koko abantu beza kwindawo yethu kwaye babhalisela i-imeyile! Awunakho ukuthelekisa ii-apile kunye neeorenji ngolu hlobo.
Iinkqubo zosasazo lwentlalo zii-CMOs's 6th-ranking (58 pesenti). Okokuqala kwabo kukuphucula iinkqubo kunye nokuhamba ngeselfowuni. Andizukugxeka lo mthetho… imidiya yoluntu ibe ngumba ophambili wesi-6 ikubonisa ubunzima enabo ngaphezu kwezinye iindlela. Inqaku elinye koku, nangona… Uluntu luSelfowuni… Kutheni ucinga ukuba indawo yakho yeselula iyanyuswa? Khangela? Ewe… kodwa intlalo nayo ibalulekile.
Olu lutsha I-OutMarket infographic Ivavanya umbono wokuba imithombo yeendaba zentlalo yinto ekufuneka uyenzile kwiimveliso zanamhlanje, kodwa inyani malunga nokuba kutheni iiCMO ziyibuza imibuzo nokuba zeziphi amandla kunye nobuthathaka bayo. Yintoni elungileyo nembi yentengiso yemidiya yoluntu? Jonga okuhle kwaye uziphathe ngasemva ngokwenza ukuba kufaneleke kumbutho wakho. Emva koko jonga okubi kwaye ulandele iingcebiso zethu ezintathu ukuze uqiniseke ukuba ubonakalisa ixabiso lentlalontle kwaye ulibophelela kwiziphumo.
tags: ishishini kpisIziphumo zeshishinic-Suiteezorhwebo ukugcwalaI-imeyile ikhupha imidiya yoluntuimeyile ngokuchasene nemidiya yoluntuinombolo kanomyayiUphengululo lwe-Intanethividiyoimisebenzi yasekuhlaleniintengiso yoluntuyentlalo kunye neselfowuniezentengisoukuzibandakanya ekuhlaleniisicwangciso seendaba zoluntuIxabiso leendaba ezentlaloababukeli betv
Ngaba iBali leNkampani yakho linezi zinto zi-5 zibalulekileyo?
Sep 29, 2014 ngo-4: 43 PM
Kuya kufuneka ndivumelane nesitatimenti malunga nokwamkelwa kokubaluleka kokuthengiswa kweendaba zosasazo. Iinkampani ezininzi aziliqondi ifuthe elinokubakho kwintengiso yemidiya yoluntu, okanye ukusilela kwayo kwishishini labo.
Ngomhla wama-24 ku-Disemba 2014 ngo-5: 31 AM
Othandekayo uDouglas uthelekiso lwakho phakathi kokulungileyo nokubi malunga nentengiso yemidiya yoluntu ibethelela isikhonkwane. Ngokwenyani ndikucacisile ukungacaci kwam ngokuthelekisa kwakho izinto ezithile endakha ndazifumana engqondweni yam.